မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 5
202 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 27th November 2009, 6:26 pm
203 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th November 2009, 7:04 pm
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ..ကျနော် က ခုမှ မန်ဘာအသစ်ပါ...အားလုံးပဲ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်
204 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th November 2009, 7:12 pm
ဖိုရမ်ကနေ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
အဆင်ပြေသွားအောင် Topic ခွဲလိုက်ပါတယ်။
205 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th November 2009, 7:39 pm
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ လေ့လာစရာလေးတွေလေ့လာပြီး သိတာလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်
206 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 28th November 2009, 9:50 pm
lynndragon @ your welcome...
207 Forum ရောက်လာကြသောညီအကို ၊ မောင်နှမ အားလုံးဝင်ရောက် ဖတ်ပေးကြပါ။ on 29th November 2009, 12:10 am
Forum ကိုရောက်လာကြသော ညီအကို ၊ မောင်နှမ များအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။
၁။ post လေးတွေကို read ပြီးသွားရင် ကောင်းခြင်း ၊ ဆိုးခြင်းများကို ဝေဖန်ပေးကြပါ။
၂။ download လုပ်ပြီး read ကြည့်၊ software ဆိုရင်လည်း run ကြည့် လို့ အသုံး ပြုကြည့် 
လို့ ကောင်းရင်လည်း ၊ ကောင်းကြောင်း post reply လေးတင်ပေးပါ။ ဒါမှနောက်က post read တဲ့လူတွေ time ကုန်နည်းသွားမှာပါ။
မိမိလည်းသူများက ကောင်ကြောင်း ၊ ဆိုးကြောင်း post reply လေးတင်ထားရင် မိမိ ရဲ.တန်ဖိုးရှိတဲ့time လေးတွေမကုန်တော့ ဘူးပေါ့ ဗျာ။
၃။ မိမိ မှာရှိတဲ့knowledge ၊ software ၊ book တွေကိုလည်း Forum ကညီအကိုမောင်နှမ များ၊ သင်တန်းတွေကို အကြောင်းမျိူးမျိူး ကြောင့် မတက်နိူင်ပဲ self-study လုပ်နေတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများအတွက်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ တယောက် ၁ အုပ်နဲ့ တင်ရင်တောင် လူ ၁၀ ယောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်းစာအုပ် ၁၀ အုပ် ဖတ်ရသလို အားလုံးလည်း စာအုပ် ၁၀ အုပ် ဖတ်ရတော့အားလုံးအကျိူးရှိတာပေါ့ ဗျာ။
အဲဒါလေး ကျွန်တော် Request လုပ်တာပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
208 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 12:40 am
209 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 7:22 am
အခုမှ ဒီဆိုက် ကို ၀င်ဖူးတာပါ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အများကြီးလေ့လာချင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဘာမှမတတ်တဲ့အတွက် ဘာမှတော့ ၀င်ပြီးမဆွေးနွေးတတ်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် သိချင်တာလေးတွေရှိရင်တော့ အားကိုးတကြီးမေးချင်လို့ ကူညီပေးကြပါနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
210 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 7:34 am
211 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 7:40 am
အားလုံးနဲ့ သိချင်ပါတယ် ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှမသိလို့ပါ
သိချင်တာလေးတွေကို အားကိုးတကြီးနဲ့မေးချင်လို့ပါ ကူညီပေးကြပါနော်....... [You must be registered and logged in to see this image.]
212 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 8:50 am
ZonN wrote: မင်္ဂလာပါ
သေးသေးလေးကအစ အကြီးကြီးထိ အကုန်မေးနိုင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
213 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 9:41 am
မေးသာမေး အားမနာနဲ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပေးပမယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
214 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 5:55 pm
တညျနရော : kawthaung
အဖွဲ့ဝင်အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပရစေ.....new user ဆိုတော့ အကြံညဏ်အသစ်လေးတွေတောင်းခံပရစေ.အဖွဲ့ကိုသာဝင်တာ.ဘာပညာမှမတက်သေးပါ.LAPTOP လေးတလုံးနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းညာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲဖြစ်နေလို့ပါ.အယုတ်ဆိုးပြောရရင် I ,T ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာမသိသေးလို့ပါ.
215 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 7:52 pm
216 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 7:56 pm
သူမြတ် wrote: အဖွဲ့ဝင်အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပရစေ.....new user ဆိုတော့ အကြံညဏ်အသစ်လေးတွေတောင်းခံပရစေ.အဖွဲ့ကိုသာဝင်တာ.ဘာပညာမှမတက်သေးပါ.LAPTOP လေးတလုံးနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းညာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲဖြစ်နေလို့ပါ.အယုတ်ဆိုးပြောရရင် I ,T ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာမသိသေးလို့ပါ.
ကိုသူမြတ် forum ထဲ မှာဖြေးဖြေးချင်းလေ့ လာပါ။လေ့ လာရင်းနဲ့ ပိုပိုသိလာပါလိမ့် မယ်။မသိတာများရှိရင်လည်းမေးပေါ့forum က ညီအကိုတွေကို။
217 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 29th November 2009, 9:11 pm
Forum ကညီအကိုတွေကကူညီတက်ကြပါတယ်။ မသိတာရှိရင်မေးကြပါ။ သိတဲ့ လူတိုင်းကပြန်ဖြေပေးသွားကြမှာပါ။
218 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd December 2009, 11:25 am
KyawHtut wrote: ကျွန်တော်ကတော့ ကျော်ထွဋ်ပါခင်ဗျာ... တခြား Ning တွေ
forum တွေမှာတော့ ဝင်ထားပါတယ်.. ကျွန်တော်က ပိုစ့်တော့ မရေးတတ်ဘူးခင်ဗျ..
အဲဒါကြောင့် ဖတ်တာပဲများပါတယ်... ကျွန်တော် networking နဲ့ wireless
အကြောင်းကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်.. လေ့လဲလေ့လာနေပါတယ်.. ဒီက
ဆွေးနွေးထားချက်များကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်.. တော်တော်လေးလဲ
ဗဟုသုတရပါတယ်... ကျွန်တော့်ကိုလဲ ကူညီကြပါ... ကျွန်တော်သိတာလေးတွေ
ရှိလဲဝင်ဖြေပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ.... networking နဲ့ wireless
ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလေးကူညီကြပါခင်ဗျာ.. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ကြိုဆိုပါတယ်...မသိတာရှိရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...ကျနော် သိတာ ဖြေပေးပါ့မယ်.... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
219 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 2nd December 2009, 2:06 pm
220 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 4th December 2009, 11:00 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] @ ရေ အဲလောက်စကားအများကြီးမ ပြောရဘူးလေ။
221 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th December 2009, 5:07 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-06
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်....... အခုမှ member ၀င်ထားတဲ့ အသစ်စက်စက်လေးပါ။ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာဆိုဘာမှ မသိသေးတာမို့ သိသမျှလေးတွေကိုပြောပြပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော်။ မသိတာရှိရင်လည်း မေးမှာမို့လို့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြန်လည်ဖြေပေးကြပါလို့ ထပ်မံပြီး request လုပ်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
222 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th December 2009, 7:24 pm
မင်္ဂလာပါ ko zay & ma nyein nyein warmly welcome From mmitresource..
223 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 7th December 2009, 8:36 am
နွေးထွေးစွာနဲ့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံး ဖိုရမ် မှာပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ မသိတာနားမလည်တာတွေကို မေးရင်း၊ သိထားတာလေးတွေကို ဝေမျှရင်းနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားကြရအောင်ပါ။
224 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 12:15 pm
ကိုစိုင်းရဲ့ Windows Registry စာအုပ်လေးဖတ်ရတယ်... ကျွန်တော့အဖို့အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်.. ကိုစိုင်း အသိပညာများတိုးသထက်တိုးတက်ပါစေ
225 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 12:29 pm
ဟာဟ..ကိုစိုင်ကျော်စွာဝေရယ်...ပညာသင်ယူဖို့လို့မပြောပါနဲ့ဗျာ။ MZ မှာဘယ်လိုဆိုတာသိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလဲ ပညာလေးတွေဝေမျှခဲ့ပါဦး။ MITR Forum မှလည်း အစ်ကို့ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
226 ကျွန်တော် user အသစ်ပါ on 8th December 2009, 12:32 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] မင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော် user အသစ်တစ်ယောက်ပါ ............... အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်မှာလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည့်ပါတယ် ................. ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ ..................... အားလုံးအားလုံးကို အစဉ်လေးစားပါတယ် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
227 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 12:45 pm
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကို Black Baddy။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ မသိတာတွေကို မေးနိုင်သလို သိထားတာလေးတွေရှိရင်လဲ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာ အစ်ကို လိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုလဲတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ Software, E-Book, Video စသဖြင့်ပေါ့။
228 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 1:42 pm
ကြိုဆိုပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this link.] @ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
229 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 1:47 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုစိုင်း ။ ပညာလေးတွေလည်းမျှဝေပေးပါအုံး။ ဖတ်ချင်လို့ ပါ။
230 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 3:26 pm
ကျွန်တော်ကိုလည်း ခင်နိုင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
231 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 5:32 pm
MITR မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ် ဖိုရမ်မှာပျော်ရွင်ပါစေ
မသိတာမေးပြီးသိတာလေးတွေဖြေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့ခင်ဖို့ကောင်းပါတယ် ဟီး စတာနော်
232 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 7:51 pm
တညျနရော : ပုလဲ-ဂန့်ဂေါ.လမ်းမ
ကျွန်တော် က User အသစ် ပါ အားလုံး ကို ခင် ပါတယ် ကျွန်တော့ မှာ လေ့ လာ စရာ တွေ အများ ကြီး ရှိပါသေး တယ် .........
အားလုံး ပဲကူ ညီ ပေး ကြပါ .........
ကျွန်တော် သိ တာ လေး တွေ ကို လဲ မျှဝေပေး နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော့ အကောင့် က တော့ 
[You must be registered and logged in to see this link.] ပါ .... [You must be registered and logged in to see this image.]
233 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 8th December 2009, 9:21 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] @ ခင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးကို ခင်ပါတယ်။
234 မင်္ဂလာပါ.... on 9th December 2009, 8:42 am
MITR ဖိုရမ်မှာရှိတဲ့ ညီကို မောင်နှ မ အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ......
ပညာဗဟုသုတ တွေလည်း အများကြီး လေ့လာဆည်းပူးချင်ပါတယ်........
အားလုံးကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်....... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
235 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th December 2009, 2:24 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုBlack Baddy နဲ.saidemon ။ ဖိုရမ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ။
236 Hi...I am... on 9th December 2009, 5:10 pm
i am new club member
Last edited by z3r0c00l on 10th December 2009, 7:37 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Title စာလုံးပေါင်းပြင်လိုက်ပါတယ်။)
237 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th December 2009, 7:09 pm
ကျွန်တော်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] မကိုတို့သိသမျှကို လည်းပြန်လည်ဝေ မျှပေးကြပါဦး
238 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th December 2009, 7:58 pm
ကျွန်တော် သိ တာ လေး တွေ ကို လဲ မျှဝေပေး နိုင်ပါတယ
239 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th December 2009, 8:07 pm
ခင်ပါတယ်ဗျာ ဖိုရမ်မှာပျော်ရွင်ပါစေ နေတိုင်းလည်းလာပါစေ
240 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 9th December 2009, 8:15 pm
You are Welcome "Connection"
241 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 10th December 2009, 7:38 am
မင်္ဂလာပါ ကိုလူမုန်းရေ။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ မသိတာတွေမေးပြီး မစင်တာတွေဆေး (အဲလေ..ဆောရီး ) သိထားတာလေးတွေ ဝေမျှခဲ့ပါဦးဗျာ။
242 မင်္ဂလာပါ... on 10th December 2009, 1:05 pm
တညျနရော : Hlaning Township, Yangon City, Myanmar.
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-10
ကျွန်တော်ကတော့ တစ္ဆေကြီးဖြစ်ပါတရ်... MITR Member အချင်းချင်း လေးစားပါတရ်...
243 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 11th December 2009, 5:32 pm
244 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ.. on 11th December 2009, 10:37 pm
အနော့်နာမည်က milo ပါခင်ဗျာ...အားလုံးနဲ့ခင်ချင်လို့ပါဗျာ...ရပါတယ်နော်.... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
245 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 7:36 am
MITR က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
246 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 7:51 am
အခုလိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲကြိုဆိုပေးတဲ့အတွက် ကိုမိုးရိပ် ကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲဗျာ.......ဟဲဟဲ...... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
247 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 8:26 am
Warmly welcome.. babymilo
248 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 10:14 am
milo မ သောက်ရတာကြာပြီး။ သောက်ချင်လိုက်တာဗျာ။ နည်းနည်းလောက်တိုက်ပါလား။ ( ငတ်ကြီးကြချင်းဖြစ်ပါသည်။ သီရိ ကဘာမှမကျွေးလို့ ။ ) welcome milo .... ကြိုဆိုပါတယ်။
249 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 10:19 am
ကြိုဆိုပါတယ် တစ္ဆေကြီး mmitresource မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ပညာရှာရင်း မျှဝေရင်းနဲ့post တွေအများကြီးတင်နိူင်ပါစေဗျာ။
250 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 10:20 am
ကြိုဆိုပါတယ် လူမုန်း mmitresource မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ပညာရှာရင်း မျှဝေရင်းနဲ့post တွေအများကြီးတင်နိူင်ပါစေဗျာ။
252 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]